युक्रेनमा अन्तत: नेटोले पनि मान्यो हार, भूमि त्यागेर शान्ति रोज्न जेलेन्स्कीमाथि दबाब !
रुसविरुद्ध युद्ध गर्नका लागि युक्रेनलाई उचालेको पश्चिम अब रुससँग सम्झौता गरेर शान्तिबहाली गर्न युक्रेनलाई फकाउन थालेको छ । अमेरिकाको बाइडन प्रशासन, पश्चिमी सञ्चारमाध्यम र नेटो तीनैथरीले रुसी विजयको वास्...
भारतमा तनाव बढाउँदै नुपूर शर्मा विवाद : मोदीलाई झस्काउने गरी किन चिढिए अरब राष्ट्र ?
भारतमा नुपूर शर्मा नामक महिलाले दिएको एक बयानका कारण उठेको विवाद मत्थर हुन सकेको छैन । सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीकी प्रवक्ताको हैसियतले एक टीभी च्यानलको बहस कार्यक्रममा शर्माले मुसलमानहरूका पैगम्बर मोहम्मद...